Home AMERIKANINA STARS Ny tantaram-piainan'i Gabriel Jesus Childhood Plus dia navoaka momba ny tantaram-piainany
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Little Neymar'. Ny tantaram-pianakavian'i Gabriel Jesus Childhood plus ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra Ny tantaran'ireo biôgrafia dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny tranga tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny fahaiza-manao nanatsarany fahaiza-manao fa mpankafy vitsy ihany no mihevitra ny tantaran'ny tantaram-piraisan'i Gabriel Jesus izay mifandray bebe kokoa momba ny ray aman-dreniny, ny rahalahiny, ny anabaviny ary ny fiainany sns. Tena mahaliana ny fiainany ivelan'ny toerana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Voalohandohan'ny fiainana
Tantaran'ny Gabriel Childhood Childhood
Gabriel Fernando de Jesosy dia teraka tamin'ny andro 3rd tamin'ny 1997 tamin'ny XNUMX tany Sao Paulo, Brezila avy amin'i Vera Lúcia Jesus (Neny) sy Diniz de Jesus (Ray).
Izy no teraka tamin'ny zaza teraka farany tao amin'ny fianakaviana 4 (zazalahy 3 sy ankizivavy).
Raha ny marina, ny fananana zaza farany sy zazakely ao an-trano dia mitondra tombontsoa maro. Ho an'i Gabriel, dia tsy mitovy ny antony. Nanome baiko an-dalambe ny maman-tsika ary mbola namela azy hikorontana teny an-dalambe.
Nobeazina tao amin'ny manodidina an'i Jardim Peri izy, tany amin'ny faritra avaratr'i Sao Paulo. Toy ireo mpilalao baolina kitra maro (ohatra ny tia ny Marcus Rashford) izay natsangan'ny ray aman-dreny bebe kokoa, i Gabriel Jesosy dia nitaiza teny an-dalambe. Nanao ny fiantsoana baolina an-dalambe izy. Raha mbola kely i 5 nilalao ny Samba Breziliana teny an-dàlambe, dia i Gabriel no nampiasa ny kianja afovoan-tananan'i Afovoany noho ny fanafihana. Tahaka izany Alex Oxlade-Chamberlain, Fantatra fa demony haingana izy nandritra ny fahazazany. Niverina izy taorian'io fanafihana feno voadona io taorian'ny mondialy 2002. Ity teboka manaraka ity dia taorian'ny nahitana sy nanitsy ny sampy tamin'ny Mondialy, Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Ity teboka manaraka ity dia nahatonga azy ho matotra bebe kokoa tamin'ny baolina kitra. Midika izany fa tafiditra ao amin'ny académie football izay aseho etsy ambany.
Ny asa fitoriana nataon'i Gabriel Jesus-Untold Story
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Rising to Fame
Rehefa miseho ho an'ny ekipa tanora maromaro (sasany amin'ny anarana malaza toy ny Little Kids amin'ny Tontolo Iainana). Nisarika ny sain'ny ankamaroan'ny andaniny ao amin'ny faritra izy raha nandroba ny tanjona 29 ho an'ny klioban'ny amiraly Anhanguera Associacao Paulista amin'ny fifaninanana eo an-toerana 15. Ity ambany ity ny karatry ny ID izany ho an'ny klioba.
Gabriel ID ID amin'ny fikambanan'ny tanora.
Ny fandrosoana bebe kokoa no nahatonga azy ho afaka hifindra any amin'ny fikambanan'ny baolina kitra Palmeiras ho an'ny ekipa tanora.
Na dia tao amin'ny 15 Gabriel aza ny mpikarakara, izay nandamina fitsarana tany Palmeiras, iray amin'ireo ekipa nentim-paharazana any Brezila. Vao herintaona taty aoriana, dia efa nitalaho tamin'ireo mpankafy azy izy ireo mba hanohana ny zokiolona. Izany dia noho izy tena tsara tamin'ny fahanterany. Tamin'izany fotoana izany, ny zokiolona tao Palmeiras dia nitsikitsiky tamin'ny fisintahana avy tao amin'ny sidina ambony indrindra any Brezila. Gabriel Iray mpitarika tokana no nitondra azy ireo nanitsy ny kaonty hahazoana ny ligy ho an'ny klioba.
Tamin'ny andro farany niainan'ny andro ara-pihetseham-po tamin'io fotoana io, i Gabriel dia namirapiratra tsy tapaka teo aloha. Ny fahombiazany tamin'ny taona 18 dia nahamarika azy tamin'ny alalan'ny scouts manerana izao tontolo izao. Na dia teo aza ny fihodinana rehetra nanodidina azy, dia tsy nanelingelina mihitsy i Gabriel. Mbola nitazona tanjona foana izy ary tsy niherika intsony. Nalainy haingana izy ho toy ny iray amin'ireo mpilalao palma indrindra tao Palmeiras ary ny Braziliana manaraka dia nahazo vola be tany Eoropa. Ity farany dia nitranga, noho ny Manchester City. Ny ambiny, araka ny ambaran'izy ireo matetika, dia tantara.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Gabriel dadan'i Jesoa, nandao an'i Diniz izy raha tena nalemy izy. Bijog Ny tatitra dia nanambara fa nandositra tamin'ny namany izy, nandao an'i Gabriela kely, ny rahalahiny, ny anabaviny ary ny reniny. Izany koa ny raharaha Alexis Sanchez.
rENY: Vera Lucia renin'i Jesoa dia manana endrika malaza eo amin'ny fiainany tahaka ny an'ny Henrikh Mkhitaryan. Miantso azy talohan'ny lalao rehetra izy. Rehefa tonga tany Angletera i Gabriel Jesosy, dia niaraka tamin'ny reniny sy ny zokiny lahy niaraka tamin'ny namana roa izy, na dia nilaza aza izy fa hitondra ny manodidina azy raha toa ka avelany ny maman-dry zareo. Samy manakaiky izy ireo ary manaja azy betsaka.
Gabriel Jesus sy Neny, Vera Lucia
Mpanaravy ihany koa izy, izay indraindray dia manintona ny sofin'i Gabriel Jesus noho ny tsy fisian'ny lozam-pifanarahana amin'ny lalao lehibe. Na izany aza, ny fanajana sy ny fananarana dia tsy olana ho an'i Jesosy. Izany dia satria efa voaofana tsara izy. Vera Lucia dia niafara tamin'ny fananganana ny efatra tamin'ireo iray tam-po aminy irery ary niasa tamina tranona an-trano tao amin'ny distrikan'i Jardim Peri mahantra ao Sao Paulo.
Gabriela Jesosy no zandriny indrindra.
Sary an'i Gabriel Jesus Family
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: fifandraisana
Angamba, maro no nanontany. Iza moa i Gabriel Jesus Girlfriend? Ny valin'ny fanontaniana dia tsotra. Gabriela Jesosy tsy mba toy izany Antony Martial Tsy miditra amin'ny fiarahamonina noho ny mamanany. Ny reniny dia mifehy ny ankizivavy tiany hanaraka azy ary koa ny toetry ny fiainam-pifandraisana misy azy 'Single' toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Amin'ny maha-mpikambana azy dia tsy manambady izy. Mahatsapa ny reniny fa tsy tokony ho variana izy ary mifantoka fotsiny amin'ny asany tanora. Izy no zava-drehetra ho azy, anisan'izany ny sipany.
Gabriel (nitranga in-1)
Miara-miasa tsara amin'ny raharahany izy.
Gabriel - izay antsoiny amin'ny anaram-bosiny 'Baby' - Voafandrika tsy hivoaka ny tanàna, misotro toaka na mifoka sigara, raha toa kosa ny WAGS / Girlfriends amin'ny fahatsapana baolina vaovao dia nampitandremana ihany koa mba hijanona amin'ny zanany.
Vera vao haingana no niteny tamin'ny resadresaka iray DailyMail: 'Ny mpivady dia tsy maintsy miaina araka ny fitsipika arahiko, ary tsy hisy ny kiss kissing sy ny sarin'ny vahoaka. Ny hijanonany dia mety hitranga indray mandeha monja. Tsy hanaiky mihitsy aho fa ny zanany lahy dia manitsakitsaka ny zanakavavin'ny hafa. Tsy misy zanaky ny zanako dia hahazo ny zanakavavy iray bevohoka. Mangataka fanajana aho satria natsangako ho azy samirery samirery, miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. '
Ary nambarany koa fa ilay mpikomy 'Tokony hampidina ny lohany rehefa miresaka aminy. Araka ny azy, .. 'Mety ho saro-kenatra aho, nefa mangataka fanajana. Gabriely tsy nanaja ahy mihitsy. ' hoy izy.
Gabriel, rahalahin'i Jesosy sy reny
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Salary Control
Tsy toy ny ankamaroan'ny mpilalao baolina i Gabriel Jesus, ka navelany hifehy ny volany ny reny. Raha ny marina dia mbola mahazo vola kely avy amin'ny mamanany izy izay 'manizingizina amin'ny fanaraha-maso ny £ 90,000 isan-kerinandro.
Araka an'i Gabriel, amin'ny teniny; 'Ny reniko no mpiady amiko ... izy no mpampiasa'
Hatramin'ny nifindrany nankany an-tanàna, Vera Lucia Diniz de Jesus dia nanome antoka fa nahazo ny karaman'ny zanany lahy izy mba hahafahany mandalo fotsiny araka izay ilainy - 'hitazona ny tongony amin'ny tany'.
Manara-maso ny sakafony mihinana amin'ny toerana alehany ihany koa izy. Tsy tian'i Jesosy ho voafandrik'izy io ny ankamaroan'ny olona, ​​fa mankasitraka ny herin'ny reniny mandritra ny androm-piainany i Jesosy. Araka ny voalazan'ny reny, 'Gabriel foana no zanako'.
Mipetraka eo ambanin'ny tafon-tranony ny reniny ary mahatonga azy hanaraka ny fitsipiny! Ilay mpilalao indray no namaritra azy 'Sarotra kokoa ny mitebiteby noho izay niaro ahy hatramin'izay.' Ao amin'ny lahatsoratra Instagram mampihetsi-po, dia nanondro azy koa izy 'mpiady vehivavy izay nikarakara ahy sy ny rahalahiko foana.'
Manana kintana tanora maro isika izay manana fifehezana be loatra saingy tsy miampita ny laharam-pahamehana. Izany no tranga Osmane Dembele.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Fitiavana an'i Jesoa Kristy
Voalohany, ny anarany dia tena mendri-piderana eo amin'ny sehatra toy ny an'ny Danny Drinkwater. Gabriela Jesosy dia avy amin'ny fianakaviana ara-pivavahana iray ary voalaza fa nitarika ny lamosin'i 33 ho an'ny Lehiben'ny tanàn-dehibe ho fanomezam-boninahitra ny taona izay ninoan'i Jesosy fa nohomboana.
Gabriel (# 33) maromaro
Nanome toky i Gabriel fa hitafy ny akanjo 33 ny tarehiny ary hitany fa tsara kokoa noho ny isan'ireo lobaka.
Gabriel facts 33
Gabriel ary Neymar JR dia naneho ny fitiavany an'i Jesoa Kristy tamin'ny fomba mahafinaritra sy mahavariana indrindra. Izy roa dia samy tompondaka olympika niaraka tamin'ny ekipa Breziliana tao Rio de Janeiro 2016.
Gabriel Jesus sy Neymar Tia an'i Kristy
Ny finoany no nahatonga azy ireo ho namana tsara indrindra.
I Gabriel, ilay namako akaiky indrindra
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Ny Dia mankany an-tanàn-dehibe
Tsy isan'andro dia ny mpilalao baolina iray 19 taona dia mahazo antso an-tariby avy amin'ny iray amin'ireo mpanazatra matanjaka azy, saingy izany no nitranga Gabriel Jesus.
Ny kintana Breziliana, izay teo afovoan'ny famindrana miady eo anelanelan'i Manchester City sy Barcelona dia nisaintsaina ny raharaham-barotra nataony raha nisy tarehimarika tsy fantatra nipoitra teo amin'ny efitranony.
Amin'ny faran'ny làlana hafa dia tsy misy afa-tsy Pep Guardiola, izay nilaza tamin'ny zatovo fa tsy misy antoka fa ny asany dia mety tsara kokoa amin'ny alalan'ny hetsika ho an'i Etihad.
Ny mpikomy Palmeiras teo aloha, izay noheverina ho starstruck, dia nihodinkodina nanerana ny tanàna izay nitifitra teo amin'ny lisitr'ireo lisitr'ireo toerana tiana. Natsangan'i Barcelona ho any an-tsain'i Neymar ho setrin'izany, saingy kely loatra izany, tara loatra: Gabriel dia nanatevin-daharana ny tanàna ho £ 28m. Hetezina hatramin'ny volana vitsy monja taty aoriana ary izy no manohana ny zokiolona Breziliana. Ny ambiny lazainy dia ny tantara.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Karazan'ny Lalao sy ny tanjaka
Gabriel style of play
Gabriela Jesosy dia andehanam-pandihizana izay afaka mameno ny ampahany manontolo. Ny mpihetsi-po mahatsikaiky dia matetika milalao miditra, ary ny hetsika sy ny footwork dia manampy ny sehatra ho an'ny mpiray ekipa ary hitondra ny hafa hilalao.
Gabriel koa dia atleta tena tsara, afaka mamela ny ankamaroan'ireo mpiaro sy mahazo hery bebe kokoa amin'ny fotoana rehetra. Izy dia mipoaka nefa tsy mibaribary, izay mamela azy hivezivezy eny amin'ny habakabaka amin'ny mailaka rehefa mihetsiketsika ny tongony. Izy koa dia manana fanentanam-po tsara sy fanandramana mivezivezy any an-habakabaka, izay mahatonga azy ho mafy ho an'ny mpiaro haka azy. Ny fahatanterahany dia toy ny tsy manan-tsiny tahaka ny an'ny mpiara-miasa aminy Sergio Aguero.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts: fahalemena
Ho an'ny mpampiofana maro indrindra indrindra an'i Pep, ny ahiahy lehibe ho an'i Gabriel dia ny fahamatorany. Afaka miseho indraindray kely amin'ny vola eo amin'ny sehatra izy indraindray, manatona ny ranomaso indraindray rehefa tsy mandeha ny zava-drehetra (izay tsy dia mahazatra loatra). Izany no nataony tao amin'ny kliobany taloha.
Ny andro Gabriely Jesosy dia nitomany - Tantarao tsy fantatra
Tsara ny mikarakara, mazava ho azy, fa ny filalaovana amin'ny ligy tsy fantatra any amin'ny firenena vahiny dia mitaky mpilalao hamelatra hoditra matevina izay mbola mbola tsy manana an'i Gabriel.
Ny fanampiny ho an'ny City dia raha matanjaka izy dia matotra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, mandray andraikitra bebe kokoa isan-kerinandro. Miaraka amin'ny tari-dalan'i Guardiola sy ireo namana Breziliana hafa ao amin'ny Ligy mba hanampy azy handamina, dia tsy misy antony tokony hisian'ny fiahiana lehibe.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Ny Idol
Ny idolany Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ianao tsy teraka rehefa nahita ny olo-manan-kaja voalohany ny Legenda. Nahafantatra an'i Gabriel i Gabriel Ronaldo Luis Nazario de Lima tamin'ny taona 5 fony izy nijery sy nankalaza azy tao amin'ny kaonty 2002 FIFA. Hatramin'io andro io, tsy nitsahatra nanonofy izy hanaraka ny dian-tongony. Araka ny voalaza etsy ambany dia novainy ny elany avy any amin'ny afovoan-afovoany afovoany mba hanafika ny toerany noho ny Legoliana Breziliana.
Ny hevitr'i Ronaldo an'i Gabriel Jesosy
Vetivety dia tonga ny zavatra manaraka rehefa tonga i Ronaldo Brezila ary nilaza izy fa nahita fitoviana maro teo aminy sy ilay mpikomy Palmeiras. Tamin'ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra, nilaza i Ronaldo:
Araka ny Ronaldo Luis Nazario de Lima,
"Mijery an'i Gabriel aho ary mijery ny tenako taloha. Hitako ny fitoviana ... dia tanora izy saingy efa nahavita zavatra betsaka ary manana andraikitra be dia be. Manana hoavy mahavariana mialoha azy izy ary efa manintona antsika amin'ny zavatra ataony ".
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Tia masom-bolo
Ny kintan'ny baolina kitra indray no nanangona mpankafy mirefy 40,000 Pig tao amin'ny Allianz Parque nandritra ny fotoanany tao Sao Paulo. Tahaka izany Aubameyang, Gabriela dia namorona sarontava mampiseho kolontsaina. Indrisy anefa fa tsy nibata azy intsony izy tamin'ny lalao farany ho an'ny klioba taloha, Palmeiras.
Ny kisoa no mofomamy ao Palmeiras, taorian'ny niverenan'ny klioba ny rivodoza mpifanolo-bodirindrina teo amin'ny lohany tao amin'ny 1990s tamin'ny fananganana ireo fanoherana ho toy ny endrika ofisialy.
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Mpankafy Basketball
Izy dia mpanohana lehibe ny ekipa mpilalao baolina Amerikana, Golden State Warriors. Manana ny fanatanjahan-tena amin'ny ekipa izy amin'ny fampiofanana gym. Stephen Curry no antony nanohanany azy ireo.
Gabriel Jesus- Fanahin'i Stephen Curry
Gabriel Jesus Childhood Story Plus Untold Biography Facts:Ny fahatezerany
Gabriely i Gabhy no karazana mena voalohan 'ny asany. Nalefa izy mba handosirana mpitantana iray nandritra ny lalao nanohitra ny Rosario Central. Nandray ny fanampian'ny kianja filalaovana ny kianjan'ny kianja izy mba hialany amin'ny toerana. Ity no hany voalohany nipetrahan'ny helo ho an'ilay mpikomy.
Gabriel Jesus Fight- Nentina ny andro helo
Aogositra 9, 2017
Novambra 15, 2017